Different shapes of head in children – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
မကျြနှာနဲ့ဦးခေါငျးဟာ ကလေးရဲ့ ပသာဒဂုဏျတဈခုလို့ပွောလို့ရမယျထငျပါတယျ။ ဒီအခါ မိဘတို့က သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ ခေါငျးက ကွီးလို့၊သေးလို့၊ရှညျလို့၊ပွားလို့၊တဈခွမျးစောငျးလို့ဆိုပွီး စိတျပူတတျကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဦးခေါငျးပုံသဏ်ဍာနျအမြိုးမြိုးအကွောငျးကို ရေးသားလိုကျပါတယျ။
ဦးခေါငျးကွီးခွငျးဟာ မြိုးရိုးလိုကျတတျပါတယျ။ အဖခေေါငျးကွီး အမခေေါငျးကွီးမို့ ကလေးခေါငျးကွီးတာဟာ စိုးရိမျစရာမရှိပါ။ ဒါပမေယျ့ အရပျအချေါ ဦးခေါငျးအတှငျး ရဝေငျခွငျး (Hydrocephalus) , ဇီးကှကျစိနျလို့ ချေါကွတဲ့ ခေါငျးကွီးလူကိုယျကွီး (Soto’s syndrome) စတဲ့ရောဂါတှမှော ဦးခေါငျးကွီးတတျတာကိုသတိထားရပါမယျ။
ခေါငျးသေးခွငျးဟာလဲမိသားစုမြိုးရိုးလိုကျတတျပါတယျ။ အန်တရာယျရှိတဲ့ခေါငျးသေးခွငျးတှကေတော့ ဦးခေါငျးခှံရိုးမြားစောစီးစှာဆကျသှားခွငျး (Craniosynostosis)၊ စီပှအကွောသရေောဂါ၊ မှေးရာပါရောဂါမြ (ဥပမာ မှေးရာပါဂြိုကျသိုးစှဲနာရောဂါ) စသညျတို့ပဲဖွဈပါတယျ။ အခြို့လမစဘေဲ့မှေးတဲ့ကလေးတှမှောလညျး ဦးခေါငျးခှံအနအေထားမမှနျတာကွောငျ့ သေးသယောငျထငျရတတျပါတယျ။
၃. ခေါငျးပွား (Flat occiput/ Brachycephaly)
ဒေါငျးကလေးလို့ချေါကွတဲ့ Down’s Syndromeကလေးငယျတှဟော ခေါငျးပွားတတျကွပါတယျ။ အမွဲတမျးပကျလကျထားပွီးသိပျတဲ့ကလေးအခြို့မှာလညျးတှရေ့တတျပါတယျ။
၄. အရှနေဲ့အနောကျ ရှညျမြောမြောဦးခေါငျး (Scaphocephaly)
လမစဘေဲ့မှေးတဲ့ကလေးငယျတှဟော ဦးခေါငျးခှံပိုပြော့တာကွောငျ့ ရှညျမြောမြောလေးဖွဈနတေတျပါတယျ။
၅. ခေါငျးရှညျ (Turricephaly)
အခြို့ကလေးငယျတှမှော အထကျအောကျ ရှညျမြောမြောဦးခေါငျးပုံသဏ်ဍာနျရှိပါတယျ။ ယဘြေူယအားဖွငျ့ ဈုးရိမျစရာမရှိပါ။
၆. ပွားတဲ့ဘကျကပွား ဖောငျးတဲ့ဘကျကဖောငျး ကလေးလေးရဲ့ဦးခေါငျး (Plagiocephaly)
ခေါငျးတဈဖကျကပွား တဈဖကျကပုံမှနျအတိုငျးဖွဈနတေဲ့ကလေးငယျတှကေို မွငျဖူးကွမယျထငျပါတယျ။ ဒါဟာ ကလေးငယျကိုတဈဖကျစောငျးပွီးသိပျတာမြားသှားရငျဖွဈတတျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ လမစဘေဲ့မှေးတဲ့ကလေးငယျတှကေို တဈဖကျစောငျးသိပျရငျဖွဈပါတယျ။ ဦးခေါငျး အုတျဆကျတဈခွမျးစောစောပိတျသှားတဲ့အခါမှာလဲ ခေါငျးတဈခွမျးစောငျးလေးတှေ ဖွဈတတျပါတယျလို့ တငျပွရငျး…။
မျက်နှာနဲ့ဦးခေါင်းဟာ ကလေးရဲ့ ပသာဒဂုဏ်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီအခါ မိဘတို့က သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ ခေါင်းက ကြီးလို့၊သေးလို့၊ရှည်လို့၊ပြားလို့၊တစ်ခြမ်းစောင်းလို့ဆိုပြီး စိတ်ပူတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဦးခေါင်းပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးအကြောင်းကို ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
ဦးခေါင်းကြီးခြင်းဟာ မျိုးရိုးလိုက်တတ်ပါတယ်။ အဖေခေါင်းကြီး အမေခေါင်းကြီးမို့ ကလေးခေါင်းကြီးတာဟာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ ဒါပေမယ့် အရပ်အခေါ် ဦးခေါင်းအတွင်း ရေဝင်ခြင်း (Hydrocephalus) , ဇီးကွက်စိန်လို့ ခေါ်ကြတဲ့ ခေါင်းကြီးလူကိုယ်ကြီး (Soto’s syndrome) စတဲ့ရောဂါတွေမှာ ဦးခေါင်းကြီးတတ်တာကိုသတိထားရပါမယ်။
ခေါင်းသေးခြင်းဟာလဲမိသားစုမျိုးရိုးလိုက်တတ်ပါတယ်။ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ခေါင်းသေးခြင်းတွေကတော့ ဦးခေါင်းခွံရိုးများစောစီးစွာဆက်သွားခြင်း (Craniosynostosis)၊ စီပွအကြောသေရောဂါ၊ မွေးရာပါရောဂါမျ (ဥပမာ မွေးရာပါဂျိုက်သိုးစွဲနာရောဂါ) စသည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အချို့လမစေ့ဘဲမွေးတဲ့ကလေးတွေမှာလည်း ဦးခေါင်းခွံအနေအထားမမှန်တာကြောင့် သေးသယောင်ထင်ရတတ်ပါတယ်။
၃. ခေါင်းပြား (Flat occiput/ Brachycephaly)
ဒေါင်းကလေးလို့ခေါ်ကြတဲ့ Down’s Syndromeကလေးငယ်တွေဟာ ခေါင်းပြားတတ်ကြပါတယ်။ အမြဲတမ်းပက်လက်ထားပြီးသိပ်တဲ့ကလေးအချို့မှာလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
၄. အရှေ့နဲ့အနောက် ရှည်မျောမျောဦးခေါင်း (Scaphocephaly)
လမစေ့ဘဲမွေးတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာ ဦးခေါင်းခွံပိုပျော့တာကြောင့် ရှည်မျောမျောလေးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
၅. ခေါင်းရှည် (Turricephaly)
အချို့ကလေးငယ်တွေမှာ အထက်အောက် ရှည်မျောမျောဦးခေါင်းပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါတယ်။ ယျေဘူယအားဖြင့် စ်ုးရိမ်စရာမရှိပါ။
၆. ပြားတဲ့ဘက်ကပြား ဖောင်းတဲ့ဘက်ကဖောင်း ကလေးလေးရဲ့ဦးခေါင်း (Plagiocephaly)
ခေါင်းတစ်ဖက်ကပြား တစ်ဖက်ကပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေကို မြင်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကလေးငယ်ကိုတစ်ဖက်စောင်းပြီးသိပ်တာများသွားရင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လမစေ့ဘဲမွေးတဲ့ကလေးငယ်တွေကို တစ်ဖက်စောင်းသိပ်ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးခေါင်း အုတ်ဆက်တစ်ခြမ်းစောစောပိတ်သွားတဲ့အခါမှာလဲ ခေါင်းတစ်ခြမ်းစောင်းလေးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့ တင်ပြရင်း…။